साँचो प्रेमको दु:खद् दुर्घटना – (माया गर्ने जोडिहरुले पढ्नैपर्ने एक दर्दनाक प्रेम कथा) – newslinesnepal
साँचो प्रेमको दु:खद् दुर्घटना – (माया गर्ने जोडिहरुले पढ्नैपर्ने एक दर्दनाक प्रेम कथा)
प्रकाशित मिति : २३ असार २०७५, शनिबार १०:५५
मलाई थाहा छैन तिमिलाई कुुन दिन देखि मन पराएं । या भनौ माया गरे मैले । तर जुुन दिन मलाई याद छ त्यो दिन मैले तिमिलाई देखेको थिए । देख्नेवितिकै मैले तिमिलाई यो मनभित्र बास दिईसकेको थिए । अझ भनौ तिमिलाई मनबाटै आफ्नो बनाई सकेको थिए । उमेर त सानै थियो होला । त्यतिबेला प्रेम गर्छुु अथवा प्रेम भनेको यो हो भन्ने मलाई पत्ता थिएन । तर तिमिलाई गरेको त्यो बेलाकै मायापनि कम थिएन । त्यो कुुनै बालशखा मात्रपनि थिएन । आँखाले देख्यो मनले रोज्यो र मस्तिष्कले आफ्नो बनाउँछुु भनेर सोच्यो । के त्यो प्रेम थिएन र ? हो त्यो नै मेरो प्रेम थियो । चोखो प्रेम र साँचो मायापनि । मैले तिमिलाई बाहेक कसैंसंग आफुुलाई कल्पना गरेर मात्रपनि हेरिन । कारण म तिमिलाई प्रेम गर्छुु ।
हुुन त म उमेरले एक अपरिपक्व बच्चै थिएं तिमि जस्तै । तर मलाई थाहा थिएन तिमि मलाई किन मन परेको छ यति धेरै भनेर । म हरेक समय आफुुलाई तिमिभित्र हराउँथे । तिम्रै काँखमा लुुटुुपुुटुु गरेको कल्पना गर्थे । तिमि भन्दा टाढा मैले कुुनै संसार देखेकोपनि थिएन र कल्पना समेतपनि गरिन । म तिमिलाई औधि चाहन्थे । मेरा सारा प्रेम तिमिमा खन्याउन चाहन्थे । तिमिमै हराउँन चाहन्थे । तर शैलु मैले बषौंसम्मपनि माया गर्छुु भन्न डराएं । सकिन तिम्रो सामुुमा पर्न र तिमिलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न । तर हरेक समय तिम्रै लागि सोच्थे । हरेक पल तिमिमै हराउँदाको झैं मजा मलाई दशैंमा पिङ खेल्दापनि भएन । तिम्रो ओठको हासो हेरेपछि मैले आफुुलाई विर्सन पुुग्थे । म तिमिमा यति विलिन भएको थिए की सायद मैले जति माया दुुनियामा कसैले कसैलाई गरेन । रोमियो र जुुलेट, मदन र मुुना, नैना र रेशमले भन्दा धेरै माया थियो तिमि प्रति मेरो । यदि मायामा पनि पैसा प्राप्त हुुन्थ्यो र त्यसको ट्याक्स तिर्नुु पथ्र्यो भने संसारको सबैभन्दा धनि म र सबैभन्दा बढि ट्याक्स मैलेनै तिर्थे होला विल गेट्सले भन्दा धेरै ।
मलाई लाग्छ तिमिलाई देख्नुु भन्दा अगाडि मेरो जिवन नै थिएन । मलाई कुुनै कुुराको सामान्य बाहेक केहिपनि हेक्का छैन । तर जुुनदिन तिमिलाई देखे त्यसपछिको हरेक समय मलाई हरेक पल याद छ शिलशिलेवार । मेरो जिवनको सुुरुवात नै तिमि हौ । तिमिले नै मलाई जिउन सिकायौ । आमाले त केवल जन्ममात्र दिएकी हुुन । हरेक परिस्थितिसम्म सोच्न र पुुग्न त मलाई तिमिले नै सिकायौ । या भनौ मैले तिमिलाई गरेको मायाले नै मलाई त्यस्तो बनायो । किन कसरी के कारण अँह मलाई यि सवालको जवाफ नै थाहा छैन । तर जुुनदिन तिमि मेरो नजरमा आयौ, त्यहि दिनदेखि मैले नयाँ संसार र नयाँ जिवनको समेत कल्पना गरे ।
तिमि बोलेको, हासेको, हिडेको, बसेको, खाएको, आएको, गएको सबै कुुरा मेरा मानसपटलमा यसरी सेट भएर बसेको छनि त्यो त म लास भएर खरानी हुुँदापनि विर्सन सक्दिन होला कसम । एउटै स्कुुल म टाढाबाट धाएर म तिमि नजिकैबाटै । म आउँदा पसिना, धुुलो र मैलोले फुुस्र्रे हुुन्थे । तर तिमि विस्तारै फोहोर लाग्लाकी भन्दै आउँथ्यौ । मैले त छुुँदापनि कतै फोहोर पो लाग्छकी झै लाग्थ्यो तिम्रो शरिरमा । टाढाबाट आयो थकाईले निदायो सरले भनेको बुुझे मुुन्टो हल्लायो नत्र यसै घर गयो ।
तर तिमि त यति मेहनत गथ्र्यौ कि म कल्पनासम्मनी गर्न नसकौला । सरले सोधेको हरेक पाठ कक्षामा भन्न सक्ने तिमि मात्र थियौ मैले भन्दा अरुसाथिलाई पनि अन्याय हुुन्न, कसम । तिमिमा त्यो क्षमता देखेर अझ धेरै भुुतुुकै हुुन्थे म शैलु । तिमिमा लगनशिलता थियो अरु भन्दा फरक लाग्थ्यो र त मैले तिमिलाई मुुटुुभरि सजाएको थिए त । हरेक रात सपनीमा आउँथ्यौ मेरा हातहरु सुम्सुुमाउँदै अंगालोमा बाँधिएर निदाउँथ्यो । तर विहान म एक्लै निरास हुुँदै उठ्न विवश: हुुन्थे । किनकि सपना विपनामा सम्भव थिएन । साँच्चै भन्नुु पर्दा मैले तिमि बाहेक अरु कुुनै केटिलाईपनि केटि जस्तो देखिन । खै त्यो तिमिमा के जादुु थियो त्यो त म के जानौ र ।
शैलु समयले त निकै फड्को मारेर गयो नि है ? धेरैको बिहे भयो । कसैको माया बस्यो । कसैको छुुट्यो । कसैले हात काटे । अनेक भयो नी त्यो विचमा त है ? मैलेनी तिमिलाई पाउँभनि मन्दिरमा गई आफ्नै हात काटे रगत बगाएं । आजसम्मपनि त्यहि चोटले मुुटुु खराव भएको छ । हातभरि तिम्रो चिनो सजाएर तिम्रो नाम लेखेर सध्य शरिरलाई काटेर रगत बगाउनुु के पागलपना मात्र थियो होला र ? त्यो प्रेम थिएन भने म एकोहोरो किन यति पागल हुन्थे होला र ?
शैलु प्रेममा जादु हुन्छ, प्रेम गर्नेहरु दुनियालाई मात्र हैन आफैलाईपनि भुल्छन भनेर मैले कथाहरुमा पढेको थिए । त्यस्तै ति कथाका पात्रहरु जस्तै मपनि तिमिभित्र हराउँदै दुनिया भुल्न थालिसकेको थिए । तिम्रो वोलि, हेराई, हिडाई, लवाई खवाईमा म यति प्रभावित थिए की दुनियाका अरु कुनै प्रेमी यति धेरै फिदा हुन्नन् होला । जति म तिमीलाई देखेर हुन्थे ।
यो त तिमिलाई देखेपछि मेरो मनमा पलाएका माया रुपि अजम्वरी वृक्षका मुनाहरु भए । यतिमा मात्र कहाँ सिमित थियो र मेरो प्रेम । विस्तारै पढाई सकिँदै जाँदा मेरो प्रेमले पनि हाँगा विँगा समेत हालिसकेका थिए । म तिमिलाई नदेखेको पल पागल बन्थे । तिम्रो हाँसो मधुर मुस्कान मैले संसारका चर्चित सुन्दरी तथा परीहरुमा पनि भेटिन । स्वर्गकी परी भन्दा लाखौं गुना राम्री थियौ तिमि र तिम्रो मुस्कान समेत ।
शैलु लाग्छ यस दुनियामा तिम्रो लागि मेरो जतिकै माया कुनै/कसैकोपनि हँुदैन हँुनै सक्दैन । मैले गरेको जति माया यस संसारमा कसैले कसैलाई गदैन । म यो ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु । मैले गरेजति कल्पनापनि यो दुनियामा कसैले गदैन होला यो पनि म ठोकुवा नै गर्न सक्छु । मैले तिमीलाई गरेको माया साँच्चै हजार जिव्रा भएका शेस नागहरु, स्वर्गकी अप्सराहरु तथा यस धर्तिका मै हँु भन्ने माईकलालहरुले गर्न सक्दैनन् । किनकी यो धर्तिमा मैले तिमीलाई गरेको जति माया कसैले कसैलाईपनि गर्नै सक्दैन्, कसम ।
यति साँचो, यति चोखो थियो की मेरो प्रेम भगवान र म बाहेक मेरो ओछ्यान सिरक डसना र अझ धेरै त सिरानीलाई थाहा छ । सिरानी म रुँदा दुखी हुन्थ्यो हासेको बेला या भनौं खुसि भएको बेला फिस्स हासेको झै उज्यालो देखिन्थ्यो । अरु बेला प्राय मेरो सिरानी दिनभरी झरीमा रुझेको विरालो जस्तो हुन्थ्यो । सिरानी दिनभर खुसि भएर बस्थ्यो मेरो पिरले गर्दा हरेक रात निथु्रक्क भीजेर जागराम बस्थ्यो । म जति रोए त्यति कमजोर हुन्थ्यो मेरो सिरानी ।
सिरानी मात्र कहाँ पीडामा थियो र मेरा कलम कापी डायरी मोवाईल सबै मेरो पीडामा हरेक पल पीडित हुन्थे संगै रुन्थे संगै खुसि हुन्थे । हरेक समयको मेरो साथि बनेर मेरा दु:खमा संगै आँशु खसाल्ने सिरानीलाई थाहा छ मेरो कारण उ कति दुखित थियो । जति नुहाएपनि आफुलाई कहिल्यै सफा महशुस गर्न पाएन मेरो आँशुले भिजेर ।
शैलु तिमीसंग मैले भविस्यका थुप्रै सपना बुनेको थिए । तर म कहिल्यै आट गरिन कसरी भनौ कस्लाई भन्न लगाऔं । एउटा तिम्रो घर नजिकैको साथि थियो उस्लाई दिनहुँ तिम्रो र तिम्रो परिवारको बारेमा सोध्थे म । र त्यसैले उस्लाई नै भन्न लगाऔं कि भन्ने पनि नसोचेको होईन तर मसंग त्यति ठूलोृ आँट कहाँ थियो र ? मैले उस्लाई भन्न लगाउन पनि सकिन । एक पटक दशैंमा तिमिलाई दिन भनेर शुभकामना लेखेको थिए तिम्रै नाममा एउटा सानो कवित पनि । र त्यहि कविता शुभकामनाको साथमा मैले तिमीलाई लेखेको प्रेम पत्रपनि दिन्छु, तर त्यो पनि आँट मनमा आएन डर मात्र लाग्यो र सकिन । अन्तमा त्यो शुभकामना र कविता मात्र लेखिएको पोष्टकार्ड मात्रपनि दिन सकिन । यदि मैले दिएं र उस्ले सबै साथिको अगाडी खोलेर हेरी र सबैलाई देखाई भने मैले यस्को जवाफ के दिनु । सबै साथिले मेरो विल्ला गरेभने के गर्नु यहि कुरा घरमा पुग्यो भने मलाई के भन्छन् बाबा आमाले मनमा यस्तै डरले डेरा जमायो र दिने आँट धकेलियो प्रयत्नहरु फेल खाए असफल सावित हुन पुग्यो ।
त्यपछि पनि म तिमीलाई त्यस्तै माया गदै गए । एकदिन त मिल्ला भन्छु भन्छु भन्दा भन्दै बषौं वित्न लागिसकेको मलाई पत्तै थिएन । एक्लै भेट्छु र दिन्छु भनेर सोच्दा सोच्दै कहिल्यै त्यो समय नै आएन मैले तिमी एक्लै भएको कहिल्यै देखिन । आज दिन्छु भोली दिन्छु, आज भन्छु भोली भन्छु, भन्दा भन्दै यतिकै समयहरु वित्दै थिए । म पढ्न भन्दानी तिमीलाई हेर्नकै लागि तिम्रै मुहार हेर्नको लागि, तिम्रो मन्द मुस्कान, मृग नयनी आँखा र त्यो चालढाल हेर्नकै लागि बढि उद्दत हुन्थे । तिमी नआउने भन्ने त कहिल्यै हुन्नथ्यो स्कुल तैपनि कथन कदाचित आइनौ भने त्यो दिन मेरा निराशामै वित्थ्यो तिमीलाई देखेको दिन लाग्थ्यो म स्वर्गमा छु र तिमी अप्सरा हौं । तिमीलाई घरी घरी कर्के नजर लगाएर साथिहरुको आँखा छली छली हेर्नुको मजा दुनियामा अरु कुनै कुरामा पाएको छैन मैले । त्यति धेरै लिन थिए । त्यतिधेरै प्रेम गर्थे म तिमीलाई त्यो एकतर्फि प्रेममै म लिन भएको थिए । एक हिसावले पागल प्रेमि जस्तो भएको थिए । तर तिमी यो सबै कुरामा अनविज्ञ नै थियौं किनकी मैले तिमीलाई भन्ने मौकानै पाएको थिईन । कतै तिमीलाई भन्दै नभनी मर्ने त हैन कहिले काँहि मन निराश हुन्थ्यो यतिकै रुन्थे ।
कतै मैले म तिमीलाई माया गर्छु भन्न नपाउँदै तिमीले मलाई छोडेर गयौ, विहे गरेउ भने अथवा म आफै मरेंभने के गर्ने ? तिमीलाई मैले गरेको मायाको बारेमा मैले जीवनको अन्तिम खण्डमा जसरी भएपनि भन्नैपर्छ र भन्छु भन्ने मनमा आशा लिएर म तिमीसंग प्रेम गरिरहेको थिए । मलाई आशा थियो । र विश्वासपनि । किनकी चोखो र साँचो माया जसरी तसरी भएपनि एकदिन सफल हुन्छ, पुरा हुन्छ मेरो प्रेम । म भगवानसंग यहि माग्थे बारम्बार हर समय, हर क्षण ।
किन होला प्रेम शब्द आफैमा पवित्र छ । यो शब्दले जव मनमा खेल्छ मनमा कसैलाई वास दिएको हुन्छ वा कसैप्रति आश गरेको हुन्छ त्यस कुराले प्रेमलाई एउटा अझ बृहत परिभाषाको जन्जिरमा कसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो । प्रेममा मान्छे किन यति धेरै सर्मपित हुन्छन् होला ? प्रेमको बारेमा लेखिएको कथा उपन्यास पढ्थे । चलचित्र हेर्थे र आफुलाई त्यो कथाको पात्रसंग कल्पना गर्थे र तिमीसंगको परिकल्पना गर्न पुग्थे । मेरो समय र दिनचर्या यस्तैमा वित्दै थियो । बालशखा देखिकै त्यो प्रेम मेरो मनभित्र एक परिपक्व र वयस्क बनिसकेको थियो तर मैले अझैपनि तिमीसमक्ष भन्ने अवसर पाईरहेको थिईन । म तिमीलाई एक्लै भेटेर भन्न चाहान्थे र त्यो अवसर विवाहकोलागि लगन जुर्न भन्दा अझ महाभारत परिरहेको थियो ।
समय आफ्नै रफ्तारमा यति दगुर्दै थियो की न कसैले रोक्न सक्थ्यो न त छेक्न नै । तर यदा कदा समयलाई नै रोकेर प्रकृतिसंगपनि च्यालेन्ज गर्न मलाई मन लाग्थ्यो, मनले सोच्थ्यो तर त्यसो गर्ने हिम्मत नै आएन । तिमी बाहेक मेरो मानसपटलमा अरु केहि कुनैपनि कुरा रहेन, यद्यपी आफ्नै सपना र लक्ष्यहरुको समेत प्रवाह नगरि एकोहोरो म तिमीप्रति प्रेममा लिन थिए र जीवनभर तिमी मै सर्मपित हुन चाहान्थे ।
यसैविच पढाईले उच्च शिक्षाको बाटो तय गरिसकेको थियो । म तिमी कहाँ पढ्छेउ भन्ने कुराको पछि लागेको थिए । र आफ्नो लक्ष्य अनि सपनाको कुनै प्रवाह नगरि म तिमीसंगै एउटा कलेजमा भर्ना भए । जुन स्कुलमा हाम्रो अरु दुईवर्षपनि वितिसकेको थियो । र त तिमी विना र तिमीसंग टाढिएर म नबाँच्ने भै सकेको थिए ।
लगभग दुईवर्षको त्यो अन्तराल सम्म आईपुग्दा मैले तिमीलाई प्रेम गर्न थालेको र भन्छु भन्छु भनेको करिव चार वर्ष वितिसकेको थियो । तैपनि मैले अझै भन्ने आँट गरेको थिईन । तिमीप्रति आफ्नो सकारात्मक प्रभाव जमाउने प्रयत्नहरु गरे र अन्तत: एक असल साथिसम्म मैले त्यो सम्बन्धलाई ल्याउन अनवरत प्रयत्नहरुबाट सामान्य सफलता प्राप्त गरेको थिए । र त्यसपछि हामी टाढियौ । मलाई त्यो विचमा जीन्दगीले थुप्रै परिक्षाहरु लिईसकेको थियो र म सबैमा असफलता प्राप्तगरि विक्षीप्त, लक्ष्य विहिन बनेको थिए । यसैको परिणाम मैले तिमिलाई देख्न र भेट्न अव सम्भव थिएन । भत्किएको सपनाहरु संगालेर राजधानी छिरेंको थिए, मनभरि तिमीलाई पाउने आशाहरु बोकेर । तिम्रा यादहरु अविरल यी आँखाहरुमा विछ्याएर ।
जति धेरै टाढा झन तिम्रो यादले मेरो मनमा अझ जरा गाडीरहेको थियो । मैले तिमी वेगर मेरो जीन्दगीमा मृत्यु मात्र देखिरहेको हुन्थे । अव गाउँ जान्छु र भन्छु अनि उस्लाई आफ्नो बनाउँछु मैले धेरै उस्कै कल्पनामा समयहरु वेतित गरिरहेको थिए । एउटा लक्ष्यमा पुग्छु उस्को मनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको काम गरेर उस्को नजरमा अटाउँछु र यि सव् कुरा गर्छु यि सव् कुराहरु सुनेपछि पक्कै उस्ले मेरो प्रेम स्विकार गर्छे र मेरो वर्षौदेखिको प्रेम सफल हुनेछ । त्यहि परिकल्पनामा हराएर निरन्तर संघर्षको मैदानमा पाईलाहरु चाल्दै थिए ।
अन्तत: उनिसंग मेरो फेसबुक तथा फोन मार्फत सम्पर्क स्थापित भयो । त्यो माध्ययम मिलाउन सहयोगी भूमिका थियो प्यारी बुने लक्षुको । र मैले उनिसंग विगत ६/७ वर्षसम्म मैले गरेको सबै कुराहरु सेअर गरे । उनि मेरा कुराहरु र मेरो प्रेमबाट असाध्यै प्रभावित भईन र भ्रमित एवं चकित पनि । मैले सोचे उस्को लागि त्यो स्वभाविक नै थियो किनकी उस्लाई मैले आजभन्दा अगाडि भन्ने मौका नै पाएको थिईन । जव भने उनि मप्रति सकारात्मक भईन र लामो समयको अथक प्रयासपछि उनि मप्रति सर्मपित हुन पुगिन र हाम्रो प्रेम सुरु भयो ।
हामी एकअर्काका एकदम नजिक बन्न थाल्यौ यद्यपी हाम्रो भेट भने त्यसबेलासम्म पनि सम्भव भएन । हाम्रो फोन तथा म्यासेजहरुमा कुरा हुन्थ्यो । मेरो हरेक कामहरु उनलाई असाध्यै राम्रा लाग्ने मेरो बानी व्यवहार सोचाई संघर्ष सबै कुराहरुबाट उनि अत्यन्तै म प्रति प्रभावित थिईन र विस्तारै उन्लेपनि मलाई औधि माया गर्न थालिन । यति धेरै प्रेम गरिन की त्यो कल्पना भन्दा धेरै बाहिरको थियो ।
प्रेममय जीवन सुखमय वित्दै थियो । मलाई जिन्दगीले कठोर संघर्ष तीर सफलताको पथमा पुर्‍याएको थियो । हामी विच कुराहरु भईरहेकै हुन्थे । समय कालसंगै मैले मेरो जीवनको अत्यन्तै कठोर समय भनेर चिन्ने मृत्युकुण्डमा थिए म । हप्ता दिनमा घर आउँथे र एक रात घरमा बसि फर्किन्थे । र फर्किँदा हामी सधै भेट्थ्यौ मन्दिरमा र कुराहरु गरेर आफ्नो बाटो लाग्थ्यो । यति प्रेमील हुनथे ति भेटहरु त्यो वयान पनि गर्न म असक्षम सावित छु ।
कुरै कुरामा एक पटक घर आएको बेला के गर्दै छौ भनेर सोधें उनले केराघारी छ आफ्नै त्याही काम गर्दै छु भनिन र मैले जिस्क्याएर मलाई केरा कोसेली नदिने ? भनेको थिए । र त्यहि कुराले अर्कोपटक म आउँदा उन्ले मलाई केरा कोसेली ल्याईदिछन् म त्यो बेला जीवनमै अतिनै खुसी भएको क्षणको रुपमा लिन्छु ।
त्यतिकैमा म आफ्नो बाटो लागे अलिपरसम्म गाडिमा संगै गईन्थ्यो त्यो दिनपनि संगै गईयो । दुईओटि बहिनी र उनिसंगै सेल्फी खिच्दै हाँस्दै रमाउँदै गयौं र उनिहरु केहि पर पुगेर मलाई विदागरि घरतिर लागे । म मनमा आधा खुसी र आधा दु:ख लिएर कर्तव्य स्थलतिर लागे । त्यस्तै क्रममा हाम्रो भेटघा त्यसअघिपनि चलिरहन्थ्यो ।
म पुगेको ठाउँमा मोवाईल लान र चलाउन निषेध थियो मैले अनेक उपाय लगाएर लगेको थिए र राति राति मिलेको बेला हाम्रो विचमा कुराकानीहरु समेत हुने गर्दथ्यो । भेटेको एकहप्ता नि वितेकै थिएन उन्ले पठाएको कोसेली झोलामा आधापनि भएको थिएन उनि बोल्न छोडिन र मलाई फोन नगर्नु भनिन । वारम्वार मलाई उनले अव वोल्दिन भन्ने संकेत दिईरहेकी थिईन । त्यो हाम्रो लागि सामान्य थिएन । म धेरै चिन्तित भए किन के भयो भन्दा केहि बोलिनन् । त्यतिकै विना कारण उनि मसंग सम्पर्क विहिन हुन खोज्दै थिईन । र उन्ले मलाई अन्तिममा एउटा म्यासेज छोडेर फेसबुकमा बल्क गरि फोन समेत नलाग्ने बनाएर टाढा भईन । मैले कयौं प्रयत्नहरु गरे सम्झाउन बुझाउन मेरो केहिसिप लागेन म असफल समवित भएं ।
त्यसपछि मलाई यो सिङ्गै पृथ्वी मै माथि आएर बसे झै लाग्न थाल्यो । उनि कीन के कारण म संग यसरी एकाएक एक्कासी टाढा भईन म यो कुरा बुझ्न चाहान्थे । मैले पछिसम्मपनि सम्पर्क गर्ने थुप्रै प्रयासहरु गरे तर उनि मसंग न त सम्पर्क मै आईन न त आजसम्म उनि किन यसरी एक्कासी टाढा भईन बुझ्नै सकिएन । त्यो उनले मलाई पठाएको अन्तिक म्यासेजमा यस्तो लेखिएको थियो । “म तपाईलाई सम्मान गर्छु, तपाईलेजति मलाईपनि अरुकसैले सम्मान गर्न सकदैनन् मलाई थाहा छ । तर कुरा यति हो अव आजबाट हाम्रो बाटो अलग अलग भयो, तपाईपनि आफ्नो बाटोमा खुसि रहनु”
त्यो म्यासेज मैले एक दिनमै लगभग हजार पटक हेर्थे होला । किन ? के भयो ? के हुँदै छ ? मेरो मनमा यस्तै जिज्ञासा सिवाय अरु केहि बाँकी थिएन । तिमीले मलाई जानाजान यति घात गरेउ मेरो मन यस्तै वेचैन थियो । त्यसपछि मलाई तिमीले पठाएको कोसेली समेतपनि खान मनलागेन र फालिदिए । साँचो र चोखो मनले दिएको भए । साच्चै माया गरेकै भए त म त्यति संघर्ष गर्न गएको थिए एकदिन सफल मान्छे बनेर मात्र फर्कने संकल्पको साथ तिमिलेपनि कुरेर बस्न सक्थेउ होला नी । मनमा अलिकतिपनि माया भन्ने कुरा नै थिएन । कस्तो रहेछ तिम्रो त मनपनि हे पापिनी ? एकहप्ता अघिमात्र तपाईलाई रुवाउँदिन म भनेर पठाएको मान्छेले एक हप्ता वित्न नपाउँदै मेरा सारा सपना चक्नाचुर पारेर गयौ । संगै चौतारामा बसेर फोटो खिच्दै कति खुसी भएकी थियौं के त्यो सव् नाटक थियो त ? आखिर किन त्यसो गरेउ तिमिले मेरो जीन्दगी चक्नाचुर बनाएर । तिम्रो चिनो आजसम्मपनि सैगै बसेर खिचेको सेल्फी बाहेक केहि रहेन मेरो मानसपटलमा ।
होला शैलु जीवन सोचेजस्तो हुँदैन तिमिलाई भन्दा धेरै मलाई थाहा छ, किनकी तिमिले भन्दा धेरै जिन्दगीलाई मैले भोगेको छु । यदि तिमी माया गदैनथेउ भने किन बेलैमा भन्न सकेनौ ? बेलैमा मसंग टाढिन तिमिलाई कस्ले रोक्न सक्थ्यो र ? मेरो मनमा आगो लगाएर मेरो जीवन अत्यन्तै जटिल मोडमा ल्याएर यसरी विना कारण छोडेर भाग्न तिमीलाई कस्ले दियो अधिकार ? कसरी सकेउ मेरो जिउँदो शरिरमा आगो लगाएर जान ? माया थिएन भने किन मेरो दु:खहरुमा रुने र खुसीमा रमाउने गर्थेउ ? मैले सानोमात्र दु:ख सेअर गरेभने ३/४ दिनसम्म आँखाभरि आँशु भरिएको फोटोहरु पठाउथ्यौं । आज छोडेर जानेले संगै जिउने भविस्यका सुन्दर सपनाहरु मसंग किन साटेउ ? किन मलाई सपना देख्न लगायौं ? मैले तिमीलाई गरेको यस्तो पवित्र मायामा कुन कुराको कमी थियो ? किन मलाई पहिल्यै भनिनौ कि म तँलाई घृणा गर्छु भनेर ? त्यसैले शैलु यो कुरा बाँचुनजेल सम्मपनि याद गर तिमीले जानाजन मेरो जीवनमाथि खेलवाड गरेर मलाई रुवाएर मार्ने प्रयत्न गरेउ, यो सम्झ की तिम्रो भलो कदापी हुने छैन । तिमीलाई बाँचुनजेल मेरा आँशुहरुले र मेरो चोखो मायाले भतभती पोल्ने छ । मेरो कलिलो मानसपटलमा धमिरा सल्काएर मेरो जीवनमा अवरोध ल्याउने तिमी मेरो जिन्दगीको कालो रात हौ भन्दा अतियूक्ती नहोला ।
तिम्रो लागि हरेक प्रयत्नहरु जिन्दगीमा गरेकै थिए । अनेकन कामले, परिश्रम, मिहेनत र सम्मानले ईज्जतपनि कमाएकै थिए । हरेक कुरामा सक्षम थिए म । न कुनै मनमा पाप थियो । म जति सत्य, भगवानरुपी मान्छेको प्रेम नपच्ने तिमीजस्तीले जिन्दगीमा प्रेमको कुनै आशा नगर्नु । माया प्रेम भन्ने कुरा तिमीले गुमाईसकेउ अव कदापी पाउने छैनौं । आफुले गरेको पाप र गल्तिको सजायँ भोग्न तयार रहनु । म जस्तै ईमान्दार, सहि, सत्य, सोझो, सफा मन भएको मान्छे नखोज्नु र खोजेउ भनेपनि तिम्रो खोज पुरा हुनै छैन । मैले त तिमी जस्ती हजारौं केटि पाउँछु, तिमीले पनि हजारौं केटा त पाउँछेउ तर मै जस्तो केटा चै पाउँदिनौ तिमीले मलाई गुमाईसकेउ ।
थाहा छ, आज मलाईपनि केहि कुरामा कमी भएको छैन खुसी नभएपनि सुखी नै छु । भगवानले मलाई धेरै राम्राबाटाहरु दिईरहेकै छन् । तिमीले मलाई लात हानेर गएपछि मलाई मेरा सपनाहरुले लात हानेका छैनन् । पीतृको आर्शिवाद, भगवानको साथ र मेरो हात खुट्टा अनि मस्तिष्क चलुनजेल म मेरै रहरमा र सपनाहरुमा बाँच्ने छु । तिमीलाई जिन्दगीभर म गरिवको आँशु लागोस । कहिल्यै भलो नहोस् मैले म जीउँदो छँदै देख्न पाउँ । र जिन्दगीमा तिमी जस्तीको पछि लागेर मैले बाँकी जिन्दगी विर्गार्ने छैन । बाँचुनजेल तिमीजस्ती कुनैपनि आईमाईको मुख हेर्दिनपनि । कोहि कुनै केटीलाईपनि मेरो जिन्दगीको सबै ढोका मैले बन्द गरिसकेको छु । मलाई दुनियामा तिमीजस्ती विश्वासघातीको संगत त के मुखपनि हेर्नु छैन र मलाई दुनियाको कुनै खुसी चाहिँदैन म मेरो आफ्नै खुसीमा रमाउनेछु ।
यो वास्तविक घटनामा आधारित कथा हो, यर्थाथता होईन । यदि यस घटनामा प्रयोग भएका पात्र, घटना, परिवेश र विषयवस्तु कसैको वास्तविक जीवनसंग मिल्न गएमा क्षमा चाहान्छु ।
लेखक– सन्तोष बजगाई
बेलकोटगढी न.पा.–९, जिलिङ नुवाकोट
रेडियोकर्मी, कलाकार एवं लेखक ।